Ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia natomboka tamin'ny endriny tsy misy NFC any Eropa | Androidsis
Roa herinandro lasa izay Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi Smartband 4. Taranaka vaovao, izay miaraka amina endrika vaovao sy endrika vaovao. Fotoana fohy taorian'ny fampisehoana ofisialy azy dia nikarakara hetsika tany Espana ilay marika sinoa, izay nanamafisana izany ny daty fandefasana azy ary ny vidiny any Espana. Efa fantatray izay kinovan'ny fehin-tànana havoaka amin'ny fomba ofisialy.
Manomboka amin'ny herinandro ambony dia azo atao ny mividy an'ity Xiaomi Mi Smartband 4 any Espana ity. Fehin-tànana tonga amin'ny endriny tsotra indrindra, ny kinova mahazatra tsy misy NFC. Zavatra efa nandrasana ary efa nanoro hevitra ny marika, saingy voamarina amin'ity fotoana ity.
Izany no toe-javatra niseho tamin'ny taon-dasa. Tsy fantatsika tsara ny antony mahatonga ny marika sinoa dia nanapa-kevitra ny handefa an'ity kinova ity any Espana ary hamela ilay kinova miaraka amin'ny NFC an'ny Xiaomi Mi Smartband 4 any Shina ihany. Saingy zavatra azo antoka fa tsy maharesy lahatra ny mpampiasa maro izany.
Ho fanampin'ny tsy fananana NFC, ity kinovan'ny fehin-tànana ity tsy manana fahaizana mampiasa baiko am-peo ihany koa io. Ka tsy afaka mampiasa azy io amin'ny Google Assistant izahay, araka ny nantenain'ny maro fa azo atao. Vaovao ratsy ho an'ireo mpampiasa nanantena ny hampiasana azy tsara kokoa.
Na eo aza izany, ny Xiaomi Mi Smartband 4 dia manohy safidy iray mahaliana amin'ny tsena. Fehin-tànana mandeha tsara, miaraka amina endriny nohavaozina ary misy vidiny mirary ihany koa. Tokony hotadidintsika fa amin'ny fandefasana azy amin'ny fomba ofisialy any Espana dia afaka mividy azy amin'ny vidin'ny 34,99 euro isika.
Azo antoka lasa fahombiazana vaovao ho an'ny marika sinoa, toy ny nitranga tamin'ireo taranaka telo teo aloha. Miaraka amin'ireo fanatsarana tonga, ankoatry ny endrika vaovao, mahaliana kokoa ity Xiaomi Mi Smartband 4 ity. Ny tsara indrindra, manana ny vidiny ambany izy, izay tsy niakatra be loatra na eo aza ireo fanatsarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Tonga any Eropa tsy misy NFC ny Xiaomi Mi Smartband 4